Myat Shu - ၀တ္ထု
You are here : Myat Shu » Archives for ၀တ္ထု
Published By Myat Shu On Monday, September 9th 2013. Under ၀တ္ထု, မျက်ရှု, ရသ
(၁) သူ လဲလျောင်းနေသည့် အခန်းငယ်သည် ပကတိ တိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက်နေလေ၏။ အသံဗလံဟူ၍ သူ့ အသက်ရှုသံ ခပ်ပြင်းပြင်းမှ အပ အပ်ကျသံပင် မကြားရ။ ဤဆိတ်ငြိမ်မှုသည် သူ့စိတ်ကို တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားစေ၏။ သူ့နှလုံးအိမ်ကို ညှိုးနွမ်းအားငယ်စေ၏။ သူ့အတွေးရေပြင်ကို ဘောင်ဘင်ခတ်စေ၏။ ထိုအခိုက်တွင် နွေဦးကာလ၌ တိုက်ခတ်လေ့ရှိသော လေပွေရူးကဲ့သို့ ဆောက်တည်ရာ မရ ဖြစ်နေသည့် အတွေးစိုင် အရှုပ်အထွေး တစ်ခုသည် သူ့ ထံပါးသို့ ရုတ်ခြည်း ချဉ်းကပ်လာလေ၏။ “ဖွင့်ပြောလိုက်ရင် ကောင်းမလား” ဟု သူ စဉ်းစားမိသည်။ မဟာသမုဒ္ဒရာ အောက်ခြေရှိ အသူတစ်ရာ စောက်သော ချောက်နက်ကြီးထက်ပင် သာ၍ နက်ရှိုင်းသည့် သူ၏ ချစ်ခြင်းတရားကို မြတ်နိုးရသူအား သိစေချင်သည်မှာ အမှန်ပင် ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Wednesday, May 8th 2013. Under ၀တ္ထု, မျက်ရှု
သရုပ်ဖော် ကာတွန်းဝိသုကြုံ (၁) လွန်လေခဲ့ပြီးသော ဆယ်စုနှစ်များ အတွင်း၌ အနောက်တိုင်း ရော့ခ်ဂီတသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ အရှိန်အဟုန် ပြင်းစွာဖြင့် ချဉ်းနင်း ၀င်ရောက်လာခဲ့ပြီးလျှင် လူငယ်တစ်သိုက်ကို ဖမ်းစားခဲ့လေ၏။ ယင်း ရော့ခ်ဂီတနှင့် တစ်ပါတည်း လိုက်ပါလာသော ဂစ်တာ ရောဂါပိုးသည် (၁၆) နှစ်သား အရွယ် ကျွန်ုပ်၏ ကိုယ်အတွင်း၌ အထက်မှ အောက်၊ အောက်မှ အထက်သို့ စုံချည်ဆန်ချည် လှည့်လည် ကျက်စားခဲ့လေ၏။ သို့ဖြစ်ရကား ကျွန်ုပ်သည် အိမ်အလုပ်၊ ခြံအလုပ် မည့်သည့် အလုပ်ကိုမျှ လက်ကြောတင်းအောင် မလုပ်တော့ဘဲ ဂစ်တာတီးခြင်းကိုသာ စွဲစွဲမြဲမြဲ ပြုတော့သည်။ ဂစ်တာပိုး စွဲကပ်နေသည့် ကျွန်ုပ်၏ လက်ချောင်းတို့နှင့် ဂစ်တာကြိုးများ ထိခတ်ရာမှ ထွက်ပေါ်လာသော အသံသည် ... Continue Reading